In la mamnuuco guurka dhallaanka aan qaan-gaarin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
In la mamnuuco guurka dhallaanka aan qaan-gaarin
La daabacay tisdag 14 februari 2017 kl 16.29
Xeerka guurka dhallaanka oo is-bedel lagu sameeyn doono
Åsa Regnér (S), wasiirka sinnaanta dhallaanka iyo waayeelka. sawir: Claudio Bresciani/TT
Dhallaanka keli-nimada dalka ku yimaada waa in loola dhaqmaa sida dhiggooda.
Isla-markaana ey helaan xuquuqda ey leeyihiin dhallaanka dhiggooda ee dalka ku dhaqan, sida ay sheegtay wasiirka sinnaanta iyo dhallaanka Åsa Regnér oo u warrameeysay idaacadda Raadiyaha Sweden laanteeda wararka ee Ekot, mar ay ka qayb qaadanaysay kulan aqoon-kororsi ee looga xaajoonayey sidii looga hor-tegi lahaa falal dembiyeedyada anshaxa.
Caqabadahaa sidii looga hor-tegi lahaa ayay sheegtay wasiiraddu inay tahay howlo u yaala maamullada degmooyinka hase yeeshee ay iyada iyo dawladda ay xubinta ka tahayba dooneyaan in dhallaanku aaney qoys noqon karin ama aanay u noolaan karin sidii qoys oo kale inta aanay gaarin da’da qaan-gaarka, sida ay sheegtay. Waana midda nagu kallifaysa inay dawladdu dib u eegis ku sameeyso shuruucda la xiriirta guurka dhallaanka.
- dabadeedna waa mid u taala hayadaha dawliga, kuwa shuruucda iyo maamullada degmooyinku sidii ey wax uga qaban lahaayeen arrimmahaa, sida ay sheegtay Åsa Regnér, wasiirka arrimmaha sinnaanta iyo dhallaanka.
Sidee haddaba laga yeeli doonaa kuwa iyaga oo qoys ah dalka yimaada?
- Dhallaanka keli-nimada ku yimaada ayay hayadda socdaalku ku meeleeysaa degmooyinka. Waana mid u taala maamullada degmooyinku sidii ey xeerka dalka u deg-san u hir-gelin lahaayeen. Sidoo kale waxaa muhiin ah in la ogsoonaado in dhallaanka keli-nimada dalka ku yimaada iyada oo aaney la socon waalidkii dhalay in loo ictiraafo loolana dhaqmo sidii dhallaan keli-nimo dalka ku yimid, sida ay hadalka u dhigtay Åsa Regnér, ahna wasiirka sinnaanta iyo dhallaanka ee dalka Sweden.